Warbixin: Caada-qaataha aan caqliga lahayn | KEYDMEDIA ONLINE
Warbixin: Caada-qaataha aan caqliga lahayn
MUQDISHO, Soomaaliya – Xukuumaddii uu hoggaaminayay RW Xasan Cali Kheyre oo uu gadaal ka riixayo Farmaajo ayaa xilkii si xoog ah kaga tuurtay guddoomihii Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari, bishii Apriil 2018, iyadoo u jeedku ahaa in Golaha Sharci dajinta la hoos geeyo, Golaha Fulinta.
Dabayaadii bishii Apriil isla sanadkaas, waxaa kusiga Guddoomiyaha Golaha Shacabka lagu fariisiyay Wasiirkii Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ee xilligaas Maxamed Mursal, si uu u fuliyo damacii laanta Fulinta ee ahaa af-duubka Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Dhamaadkii 2018, Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa Guddoonka u gudbiyey mooshin ay ku doonayeen in ay xilka uga qaadaan Maxamed Cabdullahi Farmaajo, iyagoo ku eedeeyay ku tumasho sharci iyo baal-marid Dastuur.
Taasi waxa ay sababtay in Maxamed Mursal uu Farmaajo saaro xayiraad, isla markaana guriga uu ka deggenaa xeendaabka Madaxtooyada laga jarao Biyaha iyo Korontada loona diiday inuu gawaaridiisu ka baxaan Villa Soomaaliya, taas oo keentay inuu ugu danbeyn ka baxsado xayiraadda xabsi guriga u muuqatay.
Kadib dood adag iyo dadaal dheer oo ay u galeen xildhinbaanada uu shalay sheegay in laga ganaaxay kulamada soo socda ee Baarlamaanka, ayaa dib loo siiyay xorriyaddisa shaqo, markaa wixii ka danbeeyay wuxuu Golaha Shacabka ku wareejiyay Hay’adda Fulinta, wuxuuna go’aansaday in kaliya amarka Farmaajo lagu furo laguna xir Golaha Baarlamaanka Aqalka Hoose.
Maxamed Mursal oo ah shaqsi aan fahan buuxa iyo filasho togan toona ka heysan siyaasadda ayaa cabsi uu ka qabo in mar kale biyaha loo diido darteed u burburiyay Golihii shaabka, wuxuuna u dig iyo dab leeyahay muddo kordhin aan sharciga baalna kaga oolin.
Siyaasi ku sheegga Baydhabo ku dhashay, wuxuu u muuqdaa, qof aan abaal lahayn, waxaana raggii isaga shalay difaacayay, maanta u adeegsanaya kuwii laga difaacayay.
Wadaadka Af-Soomaaliga dhankiisa abaarta ka ah, wuxuu maankiisa ka saaray in isaga iyo Golaha uu hoggaanka u ahaa xilligoodii dhamaaday, islaka markaana Farmaajo muddadiisii mar hor idlaatay, dalkuna u baahan yahay in laga shaqeeyo sidii loo aadi lahaa doorasho la isla ogol yahay.